Side Sawir looga qaada Shaashada Computerkada adigoon istcmaaleyn wax software ah (Cashir Kooban oo muhiim ah) ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
8:52:00 AM Ciladbixin-computer No comments
Aqiyarey kuso dhawaada Hooyga Barashada Computerka maanta waxan halkan ku baran doona sida loo sawiro ama sawir looga qaado qeyb kamid ah Shaashada Computerka sidoo kale qaabkan waxa uu ka saacidaya in aad si fudud Filim ama Video aad daawanesay aad sawir ugala so baxdo adigoo Sawirayo.
Hadaba yaan hadal idin ku daaline la soco cashirka:
si aad shaashada Computerka u sawirto raac Stepyada so socdo.
Step1:so kici waxa aad rabtit in aad sawir ka qaadid Tusaale ahan aniga waxan raba in aan sawiro Gameka Turubka ee Computerka ku jiro.
Markaad so kiciso waxaad Taaban doonta mesha ay ku qoran tahay PRTSC oo Keybordka Computerka ku taal.
Step2:Taabo Keybordka mesha ay ku qoran tahay PRTSC Si aad u aragto Eeg Sawirka Hoose Gaar ahan mesha Falaarta Gaduudan lagugu Muujiyay .
Step3:Markaad Taabto PRTSC waxa sameysay Sawir ama Screen Shot marka si aad Sawirkaas aad u aragto isla markaana aad ka jarato qeybta aad rabtit maxa yeelay waxa uu ku sawira shaashada oo idil si aad inta aad jaceshahay aad uga jaratit so kici Paint waxaa Paint ka hele Computerkada si aad Paint u heshid ku dhufo Star Button kadibna ku qor Paint waxa arkeysaa Sawirkas hoose kadibna ku dhufo.
Step 4:marku kuso kaco Paintiga Past ku dheh Sawirkii aad waday adigoo dhahayo Ctrl +V ama Right Click kadibna Past.
Ogoow:Hadi aad Past ku dhahday ay wax kuso bixi wayan waxaad sameynesaa Markaad taabanesid PRTSC waxaa la qabane FN waxa ay u dhawdahay Windows Key Waxa ay bidix ka jirta Spaceka
FN+PRTSC (FN ayaad qabane kadibna taabo adoo heesid FN prtsc)
Step5:markaad intaad rabtit ka jarato waxaad sameynesaa waa Savegareynesa adigoo Taabanayo Ctrl +S
Wixii su'aal ah kuso dir:alaqsaa1996@gmail.com